Accueil > Gazetin'ny nosy > Fivondronamben’ny Eveka Katolika: “Mihanaka any amin’ny seha-piainana manontolo ny kolikoly”
Fivondronamben’ny Eveka Katolika: “Mihanaka any amin’ny seha-piainana manontolo ny kolikoly”
Nandefa hafatra ho an’ny Kristriana katolika eto Madagasikara sy ny olona tsara sitra-po ny Fivondronamben’ny Eveka, izay nivoaka tamin’ny alarobia teo, ary niparitaka tany amin’ny orin’asa fanaovan-gazety omaly. Ny fiainam-piaraha-monina andavanandron’ny Malagasy no tena hita soritra ao anatin’ny vontoatin’ny hafatra saingy ny fiaimpiainan-dRamose Lucien Botovasoa no nentiny nampitahaina tamin’izany.
Araka io “hafatra” io àry aloha dia manambara amin’ny fomba ofisialy ny Fivondronamben’ny Eveka eto Madagasikara fa “amin’ny Alahady 15 Aprily 2018 no hanambarana an-dramose Lucien Botovasoa ho Olontsambatra any Vohipeno, Diosezin’i Farafangana, ka manasa ny Malagasy tsy vakivolo hiara-hisaotra an’Andriamanitra noho izany fahasoavana lehibe atolony antsika izany.Tao anatin’ny famoaboasana ny fiainan-dRamose Lucien Botovasoa no nanatsoahan’ny Fivondronamben’ny Eveka ny fahitany ny zava-misy ankehitriny eo anivon’ny fiaraha-monina malagasy amin’izao fotoana”. Tsy nihambahamba ny Eveka katolika nanipika fa hikorosy fahana tanteraka ny fiainantsika Malagasy ankehitriny. Mbola mahazo tatitra maro mampihoron-koditra izahay : noho ny fikorontanan’ny toe-tany sy ny toetrandro, noho ny hai-tany mafibe, noho ny fitiavan-tena sy ny pôlitikan’ny samy maka ho azy dia mbola mahazo vahana be dia be ny fahantrana. Ny tsy fandriam-pahalemana efa mampandry tsy lavoloha ny maro ka mampitombo ny tebiteby marain-tsy hariva. Ny fifandraisan’ny samy mpiara-belona feno tsy fifampitokisana. Mihanaka any amin’ny seha-piainana manontolo ny kolikoly ary ny vidim-piainana tsy mitsaha mitombo.Tena mahazo toerana faratampony ny fitiavan-tena sy ny fanompoana ny VOLA. Vokatr’izany, tsy misy hasiny ny aina fa tahaka ny mamono akoho ny mamono olona. Maty ny MARINA eto Madagasikara.
Eo anoloan’izany dia hitan’ny Fivondronamben’ny Eveka fa ny fiainan-dramose Lucien Botovasoa no tokony halain-tahaka. Navoitran-dry zareo Eveka mihitsy moa fa “Nitady toko isika ka sendra vato. Ny fiainan-dramose Lucien Botovasoa dia toro-làlana mazava hanampy handray andraikitra. Ny fahaizany maneho ny fahatsorany no nahamamy hoditra azy teo amin’ny mpiara-monina. Nahira-tsaina izy, ka rehefa nahavita ny fianarany dia nampianatra tao Vohipeno. Tokana ny tanjona nokendreny tamin’izany : ny hampivoatra ny tanànany amin’ny lafiny rehetra.”
Tao anatin’izany rehetra izany dia nosarihin’ny Fivondronamben’ny Eveka ny fisainan’ny kristianina katolika sy ny tsara sitra-po hibanjina ny ankehitriny satria “ny zava-misy eto amintsika amin’izao dia ny pôlitika mifototra amin’ny lainga sy ny kobaka am-bava no mibaribary hitam-bahoaka”, hoy ny “hafatra”. Tsy misy fanompoana fa fitadiavan-karena ankolaka no manjaka; kolikoly avo lenta, hoy ihany izy ireo. Ny vola sy ny fahefana no mibaiko. Tsy ny fahaizana sy ny fahendrena intsony no entina mampandroso ny Firenena. Tsy voafehy intsony momba ny fananan-tany hany ka marobe ny tany nolovaina tamin’ny razana no very na amidy amin’ireo vahiny avy any ivelany mihitsy aza. Tonga miady, mifampitory, mifamono ny mpianakavy.
Ambava homana, am-po mieritreritra, hoy ny Malagasy izay.